Ukuphuhliswa kwezicelo zeVBA ngeMicrostation -Geofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/Uphuhliso lwezicelo ze-VBA nge-Microstation
Ukwenza izicelo, i-Microstation isekela iilwimi ezahlukeneyo, kubandakanywa ULwimi loPhuhliso lwe-Microstation (MDL) ekhethwa yiBentley gurus. Ikwaxhasa isiseko esidala kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye ngaxesha nye yayixhasa iJava, yiyo loo nguqulo ibizwa ngokuba yiMicrostation J.
Kodwa ukuba ukuphuhlisa kunye bangcamle yaye ngaphandle umva, aluncedo njengoko lumalunga kwimodyuli Basic Visual ukuba uza nkqubo, iinguqulelo phambi XM (8.9) kuquka umhleli ngokupheleleyo Visual Basic 6.3, kwi zakutsha nje okungakumbi.
Kucacile ukuba umntu ongenalo uluvo lwenkqubo akananto ingako anokuyenza. Nangona kunjalo, kumntu oqonda i-OOP, kwaye wadlala ngeVisual Basic 6, uya kuzifumanisa uphantse wafa yintsini. Eminye imizekelo ihlala iza nenkqubo, kodwa nantsi iqhinga endikhe ndabona ukuba amagcisa alisebenzisa: Sebenzisa ii macros.
Microstation lula lugciniwe njenge yesiqhelo macro kwi MVBA kulwandiso, ebona ikhowudi inikezelwa kwifomu uqale senkqubo ye MicroStation isebenza kunokuba yenza imikhono yakho yemikhono zisuka nje kwasekuqaleni. Okwangoku ndiza kusebenzisa umzekelo wabahlobo baseMexico, abathi iveki ephelileyo Bandibuza uncedo lokubambisa kwiiGographics.
Indlela yokudala i-macro.
Izixhobo> macro> umphathi weprojekthi.
Apha iprojekthi entsha idalwe, kwaye ibelwe igama. Ngokuqhelekileyo zigcinwa kuyo Iifayile zeFayile / iBentley / indawo yokusebenzela / iiprojekthi / vba kodwa ungakhetha naluphi na indawo.
Ukuqala ukurekhoda, cofa uphawu lwevili oluhlaza okwesibhakabhaka. Inkqubo iya kugcina yonke into eyenziweyo ukusukela ngoko.
Umzekelo: Beka i- ucingo lombono, Cima onke amanqanaba ngaphandle imida apile kunye centroid, susa imida iilinki centroids, ukudala iimilo kwinqanaba 62, cima imida, susa iilinki centroids ukuba iimilo, umyalelo abayithweleyo theming, theming ngokwecandelo ukuba ama-apile kunye umbala ethile kwicandelo ngalinye, beka ilivo.
Inkqubo inokumiswa okwesikhashana, okanye inqanyulwe nge icon yebhokisi ebomvu. Ukuba iqhosha licinezelwe ukudlala, Inkqubo iya kwenza yonke into njengoko ndiyigcinile. Uncedo lwale nto ngaphandle kwenkqubo inomdla kakhulu ukuba ungayisebenzisa, ndibone iimenyu zenziwe kwi-macro emsulwa ngabangengabo abadwelisi benkqubo.
Ukuba ufuna sonke ixesha esilenzayo Geographics i-macro ilayishiwe, ikholomu yesine ivuliwe Ukulayisha ngokuzenzekelayo, kwaye oko kuza kwenza uguquko kwifayile msgeo.ucf.
Indlela yokuhlela ikhowudi.
Ukubona ikhowudi, cofa iqhosha elivula umhleli weVisual Basic.
Yonke into igcinwe njengemodyuli enye, kodwa ukuba uyayenza inyathelo ngenyathelo, emva koko iququzelela ukudityaniswa kweengxelo. Inokuqhutywa nangokhetho inyathelo ngesinyathelo, okuya kukuvumela ukuba iqhutywe ngamalungu njengengxaki yokukhwabanisa.
Umzekelo endikubonisa wona, osele usebenze nawo kubahlobo bam abavela emantla, ubandakanya iimodyuli ezahlukileyo zokuqinisekisa unxibelelwano kwindawo yogcino lwedatha, ukwenziwa kwesiqhelo kwamakhonkco, ukwenziwa kwamaziko axhunyiwe, ukusetyenziswa komxholo enye kuseto lwehlabathi. Ikhowudi inokuthwala inombolo yokuvula, okuvimbela abaqhubi ukuba bangabangela intlekele okanye baqulethe ukwahlukana kwamathala eencwadi eklasi esingafuni ukwabelana nawo ngomprogram yomsebenzisi.
Ukuvavanya i-Promark3 ... iifoto nje
Tere. USelline küsimus. Ngaba i-koodisüsteemid ja andmete yokuthumela ngaphandle / yokungenisa iTrumple S6 kunye ne-PowerDraft-i tegelete? Inkqubo yeOtsin.
G! 2 uthi:
Ndicinga ukuba isakhiwo sekhowudi saziwa, sitshiza.
IVectoral Creature uthi:
Utshaya umvumba wecuba akukho nto.